जापान–नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पु-याउन प्रयत्नशील रहनेछु : जापानी राजदूत किकुता | Margadarsannew.com
युताका किकुता नेपालका लागि जापानी नवनियुक्त राजदूत हुनुहुन्छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कूटनीतिज्ञ किकुता हालै नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको हो । यसअघि उहाँ नाइजेरियाका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो । त्योभन्दा अघि उहाँले भुटानमा डेपुटी चिफ अफ मिसन र सन २०१५ मा भारतमा पनि डेपुटी चिफ अफ मिसनका रुपमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । यसअघि थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा रहेका जापानी मिसनमा रहेर काम गर्नुभएका एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ किकुता हालैमात्र नेपालका लागि जापानी राजदूतमा नियुक्त हुनुभएको हो । राजदूत किकुतासँग सोमनाथ लामिछाने र एकराज पाठकले जापानी दूतावासमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महामहिम राजदूतज्यू, नेपाल र जापानबीच जनस्तरमा र सरकारीस्तरमा पनि विगत लामो समयदेखिको निकै सुमधुर सम्बन्ध रही आएको त यहाँलाई विदितै छ । यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि यहाँले आफ्नो कार्यकालमा के-कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त नेपालजस्तो देश जहाँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ र जहाँका नागरिकले “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी” भन्ने मान्यतालाई अघि सार्ने गर्दछन्, यस्तो देशको राजदूतका रुपमा नियुक्त हुन पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” का लागि म नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकसँग आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छु ।
हो, नेपाल र जापान निकै लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध र असल मित्रका रुपमा अघि बढिरहेका छन्, जुन कुरा म एकछिनमा बयान गर्नेछु । नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धमा त मेरो दिमागमा पनि कतिपय अविस्मरणीय क्षणहरु पनि छन् । यस्तो सम्बन्धको जगमा रहेर यसलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि म पनि मेरो कार्यकालभर प्रयत्नशील रहनेछु । मेरो यस्तो रणनीति छ कि म यहाँ रहुञ्जेल मैले धेरै भन्दा धेरै नेपाली नागरिक, नेपालका उच्चस्तरीय नेता, उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेट तथा अन्तक्र्रिया गर्नेछु । त्यसैगरी सम्भव भएसम्म म नेपालका धेरैभन्दा धेरै स्थानको भ्रमण पनि गर्नेछु ।
जापान र नेपालका सम्बन्धको इतिहास धेरै लामो र गहिरो छ र जसको शुरुआत जापानी भिक्षु एकाइ कावागुचीको सन १८९९ मा भएको नेपाल भ्रमणबाट शुरु भएको हो । त्यस्तै जापान र नेपालले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध भने सन् १९५६ मात्र स्थापित गरेका हुन् र त्यस यतादेखि नै हामीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई असल मित्रका विकास गर्दै आएका छौँ ।
व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मेरो गृहनगर जापानको फुकुशिमा हो । सन् २०११ मा जापानमा आएको महाभूकम्प र सुनामीले गर्दा त्यहाँको तोहोकु क्षेत्रलाई निकै क्षति पुगेको थियो । त्यस समयमा हाम्रो दुःखमा हामीप्रति सहानुभूति राखेर हाम्रा लागि नेपाली नागरिकले प्रार्थना गर्नुभएको थियो । त्यसैले म व्यक्तिगत रुपमा यसका लागि नेपाली नागरिकप्रति कृतज्ञ छु । तपाईं पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि मार्च महिनामा त्यस क्षेत्रमा निकै चिसो हुन्छ । त्यस्तो आपतका बेलामा मेरा आमाबुबा, मेरो परिवार र आफन्तजन एवं त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जापानी नागरिकहरु चिसोले निकै दुःख पाएका थिए । उनीहरु खाना, विद्युत, ग्यासलाइन विहीन भएर बस्नुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले पाँच हजार ब्लाङकेट सहयोग स्वरुप त्यो क्षेत्रमा पठाएको थियो । यसबाट त्यहाँका हजारौँ नागरिकको ज्यान बचेको महसुस हामीले गरेका छौँ । त्यस्तो अप्ठेरो बेलामा नेपालीले पकाएर दिएको दालभात तथा तातो कफिले उनीहरुलाई बाँच्न ठूलो सहायता पुगेको थियो ।
यी प्रत्यक्ष सहायताबाहेक जापानले कोभिड–१९ बाट सिर्जित अन्य विषयमा नेपाललाई सहयोग गर्दैछ । उदाहरणका लागि, हामीले नेपालको खाद्य सुरक्षामा विश्वखाद्य कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिरहेका छौं । यस कार्यक्रमबाट प्रदेश नं १ र २ का जोखिममा परेका जिल्लामा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिएको छ । आउँदा दिनहरुमा जापानले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ । प्रमुख सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी७) र क्वेड (जापान, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया) का सदस्य मुलुकले निम्न प्रतिबद्धता छन्ः
– हामी सुरक्षित, पहुँचयोग्य रुपमा सस्तो र प्रभावकारी खोप उत्पादन र विस्तार गर्न तथा त्यसको समतामूलक पहुँचका लागि मिलेर कार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ, र आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्र बनाउन र विश्व स्वास्थ्यलाई लाभ पु-याउने छौँ । (क्वेड, मार्च १२)
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हुन् जसलाई हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमेत सबै मिलेर सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी तापमानका सन्दर्भमा नेपाल एक्लो छैन र हिमाली हिमनदीको मुलुक नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो छैन । अर्को उदाहरण, शहरी क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर पनि छलफलको विषय हुन सक्दछ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी ट्राफिक कम गरेर वायुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, र यसमा पनि जापानले काम गरिरहेको छ । मैले भन्नैपर्छ, यस्ता समस्या सुल्झाउन सकिए भावी पुस्ताको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिने छ ।
जापानमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ ? के यसअघि तपाईं नेपाल आउनुभएको थियो रु कुनै स्मरणयोग्य क्षण छ ?
सन् २००५ मा तत्कालीन अधिराजकुमार पारस शाह र अधिराजकुमारी हिमानीलाई जापानको आइची एक्स्पो २००५ मा स्वागत गरेको थिएँ । राजकुमारी हिमानीले मलाई दिनुभएको काठले कुँदिएको कलाकृति मेरो घरमा अझै सजिएको छ । त्यही शैलीको एउटा गहना यहाँ जापानी राजदूतावासको कार्यालयमा पनि पाएको छु । (रासस)